विनम्रता अरुका लागि मात्र पनि होइन, आफ्नै लागि पनि उपहार हो - गोपालदाईको कथा सहित - उज्यालो पाटो
चिया पसलमा दुई युवक भेटिए । कुनै विचारप्रति एकअर्कासँग मतभेद भएका । दुवै एक अर्काका सामु आफु बढि जान्ने वा पढन्ते हुँ भन्ने देखाउँन तत्पर । उनीहरुले एकअर्कामाथि प्रहार गरेका शब्दहरु भयानक मात्रै थिएनन्, स्तरहिन र अहम्तापुर्ण थिए तर उनीहरुलाई त्यसको हेक्का थिएन । विवादमा जित्न उद्यत उनीहरु जित्न जस्तो तर्क र जत्रो स्वर नि गरिरहेका थिए ।
ति दुईको विवादले चिया पसलको वातावरण स्तब्ध भयो । नजिकै चिया पिइरहेका गोपालदाईलाई चित्त बुझेन । उनले भनेँ, “भाईहरुको जुधाईले आज चिया पसल नै ननिको भयो ।”
“जुधाईले होइन, बरु भन्नु न, तिमीहरुका कुरा बुझिएन ।” विवाद गरिरहेको एउटा युवक बोल्यो, “यी कुरा बुझ्न र बहस गर्न पनि धेरै पढ्न पर्छ दाई ।” उसको बोलीमा आफुहरुले गरिरहेको बहसको बिषय र प्रयोग गरेका शब्दहरुको वजनप्रतिको उनीहरुको अभिमान झल्किन्थ्यो ।
“हो, मैले यति धेरै जुध्न सक्ने गरि पढेको छैन ।” गोपालदाईले भने, “तर पढ्नुको अर्थ मलाई थाहा छ र पढे पछि मान्छे कस्तो हुनु पर्छ भन्ने म बुझ्छु ।”
गोपालदाईको जवाफले ति युवकहरु केहिबेर चुप भए ।
“पढ्नुको अर्थ आफ्नो बोलीले बुझाउँछ कि बिझाउँछ भन्ने थाहा पाउँनु हो । पढ्नुको अर्थ पढेकासँग कसरी र नपढेकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने थाहा पाउँनु हो । पढ्नुको अर्थ आफुसँग सहमत हुनेसँग कसरी र असहमत हुने सँग कसरी वार्तालाप गर्ने भन्ने बुझ्नु हो । पढ्नुको अर्थ सबैका लागि खुल्न सक्नु हो र पढ्न वा जान्न कति बाँकी रहेछ भन्ने थाहा पाउँनु हो । आफु भन्दा बढि जान्नेहरुले भरिएको संसारसम्म पुग्नु हो ।” गोपालदाईले थपे, “पढ्नुको अर्थ पुस्तकालय जस्तो हुनु हो र ? पुस्तकालयमा किताबका जति थाक भए पनि पुस्तकालय स्वयम् ज्ञानी बन्दैन । जसरी कसैलाई प्रयोगमा नआउँने वा कसैका लागि खुल्ने ढोका नभएको पुस्तकालय उपयोगिताविहिन हुन्छ, त्यसरी नै पढेर पनि उचित व्यवहार गर्न नसक्ने र अहमले भरिएको मानिस पनि बिनाअर्थको हुन्छ ।”
“अहम भर्नका लागि त नपढेकै राम्रो भाईहरु ।” गोपालदाईको कुरा सुनेर टोलाएका ति युवकहरुलाई नम्र स्वरमा भने, “पढेकाको व्यवहार देखेर नपढ्नेहरु चुकचुकाउँन् । पढ्नतिर आकर्षित होउन् । होइन र ?”
दुई युवक केहि बोलेनन् । दुवै त्यहाँबाट उठे । एउटा युवक चिया पसलको ढोकामा पुगेर चुपचाप अर्कोलाई पर्खियो । अर्को गएर चिया पसले दिदीलाई ५० को नोट दिदै भन्यो, “दुईटा चिया ।”
चिया पसलकी दिदीले २० रुपैया फिर्ता दिदै भनिन्, “आज चिया पसलमा पढे जत्तिको पाठ त कहिलै पढ्नु भएको थिएन होला है ।”
युवकहरु सुनेको नसुनै गरेर चिया पसलबाट बाहिरिए ।
जानकारीको बोझ र मपाइत्वको पहाड
माथिको कथा वास्तविक होइन तर वास्तवकितामा यस्ता धेरै पल्ट भएको मैले देखेको छु । पढेका मानिसहरुमा धेरैले नपढेकालाई अज्ञानी वा कुरा नबुझ्ने ठान्छन् । नपढेका मानिसहरुका अगाडी अफ्ठ्यारा शब्द वा अर्कै भाषामा (हाम्रो देशमा अंग्रेजीमा) कुरा गर्दा वा अर्कै भाषाका शब्दहरु बिच बिचमा घुसाउँदा पढेकाहरुले गौरव अनुभुति गरेको देखेको छु । अनि, मैले सोचेको कुरा नै अन्तिम र सहि सत्य हो, यसलाई जसरी पनि जोगाउँनु पर्छ भनेर आफ्ना तर्कहरुलाई व्यक्तिगत अहमको घोडा बनाएको पनि देखेको छु । चियापसलमा बहस गर्ने दुई जना युवकले तिनै पढेका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जो पढ्नुलाई घमण्डको बिषय बनाउँछन् । गोपालदाई तिनका विरुद्धमा उभिने ति मानिसहरु जो जीवनका सिकाइहरुबाट किताबका ज्ञान भन्दा बढि हाशिल गरेका छन् ।
कथामा स्पष्ट छुट्टिए पनि दैनिक जीवनमा बेला बेला दुई युवकहरु सहि लाग्छन् । म आफुलाई पनि पढेका, अफ्ठ्यारा बिषयमा अफ्ठ्यारा शब्दहरुमा बहस गर्न सक्ने मानिसहरु विशेष लाग्छन् । हुन त, विशेष लाग्नु फरक हो र त्यस्तै फरक कुरा हो, आफु विशेष ठानेर मपाइत्वको पहाड बोक्नु ।
मपाइत्वको पहाडले मान्छेलाई किच्छ । यसले आममानिस भन्दा फरक हुँ भन्ने भ्रमको पर्खाल यति अग्लो बनाइदिन्छ कि बिस्तारै आममानिस मानिस नभएर खसीबाख्रा जस्ता लाग्छन् र आफु हाती जस्तो । आफुलाई सहि भन्नका लागि हरेक मानिससँग कारण र तर्क हुन्छन् । यस्तै आफुलाई हाती सम्झिने र अरुलाई खसीबाख्रा सम्झिनेसँग पनि तर्क हुन्छन् तर ति तर्कले मान्छेलाई नजानिदो गरि समाजबाट अलग्याउँन थाल्छ । समाजलाई सकारात्मक प्रेरणा दिन वा समाजलाई नयाँ आविश्कारको उपहार दिन केहि समय मानिस समाजबाट अलग्गिनु राम्रो पनि हो तर आफुलाई हाती सम्झिने सोचले समाजलाई समाजलाई सकारात्मक प्रेरणा दिदैन, न यसले नयाँ आविश्कारको उपहार दिन्छ ।
यस्ता मानिस आफु पनि जानकारीको बोझले थलिएका हुन्छन् । मलाई धेरै कुरा थाहा छ भन्ने जानकारी बोझ हो, यसले मान्छे, समाज वा समयसँग सहि सम्बन्ध राख्नलाई भाँझो हाल्छ । आफ्नो समस्याका बारेमा अरुसँग सहयोग माग्नबाट रोक्छ । मलाई जति अरुलाई थाहा छैन र मैले जानेको कुराले नै राम्रो परिणाम निकाल्छ भन्ने सोचाइले समस्याहरुप्रति नयाँ फरक फरक दृष्टिकोण हुने भएन, यसले एकाङ्गी समाधान मात्रै निकाल्ने भयो ।
मान्छे वास्तवमै सामाजिक हुने र उदाहरणिय हुने हो भने जानकारीको बोझ फ्याक्ने हो र मलाई थाहा नभएका कुरा साह्रै धेरै रहेछन् भनेर विश्वास गर्ने हो । मपाइत्वको पहाडबाट उठ्ने हो र नम्रताको न्यानोपन महसुस गर्ने हो ।
विनम्रता आफ्नै लागि पनि उपहार हो
मान्छे कस्तो हुने त ? सजिलो जवाफ, मान्छे नम्र हुने । अझ पढेको वा जानेको छु भन्ने मानिसमा त्यो नम्रता देखिने गरि हुनु पर्छ । माथिको कथामा गोपालदाई पात्रले भने जस्तै ‘बुझाउँदै छु कि बिझाउँदै छु भन्ने थाहा पाउँने हुनु पर्छ ।’ नम्रता र चाप्लुसीमा फरक छ भन्ने ज्ञान हुनु पर्छ । नम्रताले कसैको पनि हानी गर्दैन । भनाई नै छ, “गिलो खाना र नम्र भावनाले कसैको हानी गर्दैन ।” अझ नम्र हुने मान्छेलाई त फाइदा पुर्याउँछ ।
नम्रताले मनको अंहकार र अभिमानलाई मेटाउँदै लैजान्छ । अरु मानिस पनि सम्मानयोग्य छन् भन्ने कुराको उदाहरण दिन्छ । जति नम्र र अरुलाई सम्मान गर्ने भइन्छ, मानिसहरुले आफु प्रति राख्ने धारणा र गर्ने व्यवहार पनि सम्मानित र विनम्र हुन्छ । विनम्रताले नबन्ने कामहरु पनि बन्छन् । विनम्रताले सम्मान बढाउँछ । विनम्रताले आफु साथ भएका मानिसहरुसम्म पनि सकारात्मक आचरणको प्रभाव छोड्छ । विनम्रताले मष्तिस्कमा अनावश्यक मानसिक विकारहरु उब्जिन दिदैन ।
यसैले विनम्रता अरुका लागि मात्र पनि होइन, स्वयम् आफ्नै लागि पनि उपहार हो ।
तर विनम्रता, चाप्लुसी र सहनु फरक कुरा हुन्
विनम्र हुनुको हद चाप्लुसी होइन । विनम्रताले चाप्लुसी गर्दैन र अर्काको नराम्रो कुरा सहनु पर्छ भन्ने पक्षपोषण गर्दैन, बरु खराब कुराहरुको अराजक नभइकन बिरोध गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
आफुसँग भएको ज्ञानले विनम्रतापुर्वक मान्छेहरुसँग व्यवहार गर्न सकियोस् । माथि चियापसलमा भएको दुई युवा र गोपालदाई बिचको घटनाले पनि यहि कुरा देखाउँछ ।